Taliye lagu dhaawacay Muqdisho
4 Dec 4, 2012 - 10:26:43 AM
Taliyaha ciidamada Taraafikada Muqdisho Gen. Cali Xirsi Barre [Cali Gaab] ayaa lagu dhaawacay Maanta 04 December,2012 Muqdisho, waxaana dhaawiciisa geystay Askari la sheegay inay isbaaro u taalay wadada 21-ka Oktoobar oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dhaawaca Taliyaha ayaa la dhigtay Isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala Degmada Hodan, halkaasoo ay ku booqdeen saraakiil uu ka mid yahay Afhayeenka Booliiska Soomaaliya Gen. Cabdulaahi Xasan Bariise oo sheegay in askari burcad ah uu dhaawacay taliyaha.
"Gen. Cali Gaab waxaa dhaawacay Askari Burcad ah oo taagnaa jidka, xaaladiisuna waa mid fudud oo isaga ayaa saxaafada la hadli doona" ayuu yiri Gen. Bariise warbaahinta kula hadlay isbitaalka lagu daweynayay Taliyaha.
Intaas kadib waxaa saxaafada la hadlay Gen. Cali Gaab oo sheegay inuu qabo dhaawac fudud, isagoo sheegay inuu dib howshiisa u bilaaban doono hadii uu ka bogsado dhaawaca gaaray.
"Dhaawaceygu waa fudud yahay, waxaana rajeynayaa inaan mar dhow howshayda dib u bilowdo" ayuu yiri Cali Gaab oo sheegay in Saxaafada Qaarkood ay baahiyeen inuu dhintay, balse ay taas tahay been aanay waxba ka jirin.
Askarigii dhaawaca u geystay Taliyaha ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday, iyadoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in askarigu uu ka tirsanaa ilaaladii isaga la socotay ayna isku qabsadeen qoriga, taasna ay keentay inuu dhaawac fudud gaaro.
Taliyaha la dhaawacay ayaa waxay imaanaysaa iyadoo Muqdisho uu ka socdo olole isbaarooyinka lagu qaadayo, inkastoo isbaarooyinkii waaweynaa la qaaday hadana waxaa jirta in weli ay jiraan ciidamo labisan ay meelaha qaarkood lacago kaga qaadanayaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa xamuulka.